नेपाल ग्यासको कम्पोजिट सिलिण्डर ९ हजार २ सय २५ रुपैयाँ ! - नेपाल ग्यासको कम्पोजिट सिलिण्डर ९ हजार २ सय २५ रुपैयाँ !
नेपाल ग्यासको कम्पोजिट सिलिण्डर ९ हजार २ सय २५ रुपैयाँ !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, ४ भदौ, 07:04:46 AM
काठमाडौं । नेपालको पहिलो ग्यास उद्योग नेपाल ग्यासले कम्पोजिट सिलिण्डर बजारमा ल्याएको छ। कम्पोजिट ग्यासलाई एक कार्यक्रमका बिच उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादबले सिलिण्डरको बिक्री शुभारम्भ गरेको नेपाल ग्यासले जानकारी दिएको छ ।
कम्पोजिट सिलिण्डरको नेपालको एक मात्र यस्तो ग्यास हो जो आगोले विस्फोट हुँदैन।कम्पनीका अनुसार सिलिण्डर पारदर्शी भएकाले उपभोक्ताले ग्यासको लेभल सजिलै जाँच्न सक्ने छन् । कम्पनीका अनुसार अल्ट्राभ्वाइलेट किरणबाट सुरक्षित र इकोफ्रेण्डली मानिएको कम्पोजिट सिलिण्डर सबै मौसममा उपयुक्त हुने भएको छ ।
फाइबरले बनेकोले सिलिण्डर हलुका छ । कम्पनीले कम्पोजिट सिलिण्डर १४.२ किलो र ५ किलोमा बजारमा आएका छन् । कम्पनीका अनुसार १४.२ किलो फाइबर सिलिण्डरको ग्यास वाहेक ९ हजार २ सय २५ रुपैयाँ र पाँच किलोको ६ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ पर्छ। यो सिलिण्डर मेरोकिराना डटकमबाट किन्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ।
यो सिलिण्डर विस्फोटन नहुने र पूर्ण सुरक्षित रहेको उद्योगका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले जानकारी दिए।
२०७५, ४ भदौ, 07:04:46 AM